Counterfit: yakavhurika sosi chishandiso kuongorora AI | Linux Vakapindwa muropa
Kune zvakawanda uye zvinowedzera kuitika zve njere yekufunga, kuomarara kweiyi AI kuri kuwedzera nguva dzese, uyezve ndima yekushandisa. Iri kutoshandiswa muhutano, hutongi hweveruzhinji, tsvagiridzo, masevhisi, nezvimwe. Asi maalgorithms aya haasi eupenzi kana zvasvika pakuchengeteka, kune zvimwe zvinogona kutyisidzira kwavari. Muchokwadi, sekufambira mberi kweAI, kutyisidzira kwakawanda kuri kuwanikwa. Ndosaka kukosha kwezvishandiso senge counterfit.
Sezvo iwo ari masisitimu akaomarara, masystem akachengeteka ekuchenjera anodiwa. Uye kune izvi, akateedzana ematanho ekuongorora uye zvishandiso zve kukwanisa kuzviongorora zviri nyore. Muenzaniso ichi chishandiso cheMicrosoft chandakataura mundima yapfuura.
Microsoft yakagadzira chishandiso ichi chicharerutsa kwazvo basa, uye chazviita pasi peyakavhurwa sosi rezinesi (MIT rezinesi) uye kuburikidza neplit yayo yeGitHub, kuti igone kuwanikwa kune vese avo vanoda kuishandisa, uye zvakare inokwanisa kutora chikamu mukusimudzira kwayo. kupikisa Izvo zvinobvumidza vanogadzira kuti vaedze kuchengetedzwa kwemaitiro ehungwaru ehunyanzvi padanho rekutanga rekuvandudza, nekudaro vachiona kuti hapana maburi akakomba
Kana uchifarira kuziva nezvake, unogona kuwana yako repository paGitHub kubva pane iyi link. Ikoko iwe unowana iyo sosi kodhi, ruzivo, kana iwe unogona kurodha pasi uye kuyedze iyo pane akawanda mapuratifomu. Uye zvakare, sezvo yakanyorwa muPython, unogona kuishandisa muLinux pasina matambudziko.
Chishandiso chakazvarwa mukati meMicrosoft, nekuda kwavo kudiwa kwekutarisa maitiro avo ekutarisa. njere dzakagadzirwa uye kudzidza kwemuchina kutsvaga kusagadzikana. Iyo pakutanga yaive yakagadzirirwa kuyedza masystem, asi ikozvino inogona zvakare kushandiswa panguva yeAI yekuvandudza nhanho.
Sezvauri kuona pane ino saiti, iwe uchafanirwa kuisa Anaconda Python munharaunda kuti ukwanise kushandisa iyo Python script. Imwe sarudzo ndeye kuishandisa kuburikidza neAzure Shell kubva pawebhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Counterfit: yakavhurwa sosi chishandiso kuongorora AI